Inzuzo yethu - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Ibhodlela Lamakha Okunakekela Umuntu
UKUPHUMELELA KHO KONKE ESIKWENZAYO
Sizinikezele ekuhlinzekeni izixazululo ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokupakisha ezingaba khona kumakhasimende ethu, nasekuthuthukiseni imikhiqizo emisha nemisha.
Sizibophezele ukubeka amakhasimende ethu phambili futhi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu nokweneliseka kuyo yonke inqubo. Siyohlala sikhululekile, sithembekile futhi siyakwazi ukuxhumana nabantu. Silwela ukubheka njalo izidingo zamakhasimende ethu futhi sinikeze izixazululo ezingcono kakhulu zokupakisha, kungakhathalekile ukuthi siyini.
AMAKHwalithi aphezulu ngentengo enhle
Sinikeza zombili Isitokwe futhi Kwenziwe ngentando imikhiqizo yokupakisha, kuya ngezidingo zamakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu yesitoko ikhethwe ngokucophelela futhi igcinwe isendaweni yethu yokugcina impahla.
Indawo yokugcina impahla yakwaKeming, elungele ukuthunyelwa ngomzuzwana, ngenkathi imikhiqizo yethu yangokwezifiso ingenziwa, iqediwe, futhi iphrintwe ukuhlangabezana nokubukeka okuhlukile komkhiqizo wakho, ngokusebenzisa uhlu Izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso. Noma ngabe ufuna izinto ezisezingeni eliphakeme zesitoko noma okungcono kakhulu ekupakisheni okwenziwe ngokwezifiso, sinemikhiqizo nezinsizakalo ezihamba phambili ukuhlangabezana nezidingo zakho futhi weqe okulindele.
Siqalise izinhlelo eziluhlaza ezigxile ekuqedeni ukungcola kanye nasekuqhakambiseni ukusebenza kahle, futhi sanwetshwa saze sakhiqiza amaphakethe anezinto ezenziwe kabusha nezisetshenziswa kabusha. Sizibophezele ekubeni ngumkhiqizi oluhlaza, futhi sihlale sibheke ukwenza ngcono nokucwenga izinqubo zethu zokunciphisa umthelela wethu emhlabeni.
Ukufaka olunye ungqimba lwezokuphepha ukuqinisekisa ukuthi uzothola ukungaguquguquki, ubuhle, kanye nenani ngaso sonke isikhathi lapho usebenza nathi, sobabili siqinisekisiwe nge-ISO 9001 ne-ISO 14001. Siphinde futhi sibe ngomunye wemikhiqizo emikhulu yamazwe omhlaba esisebenza nawo. Lezi zitifiketi nokuhlolwa kwamabhuku kuqinisekisa ukuthi uzothola imikhiqizo ehamba phambili, ngaso sonke isikhathi.
Isho ukuthini ilebula ebhodweni lamakha ...
I-Perfume Bottle Evolution: Amakha afanayo, d ...